Ifama ephangaleleyo-Wi-Fi -Izolonwabo- Intuthuzelo- Ukhuseleko
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguRosane
Uyayazi loo ndawo apho usiva khona isandi seentaka, abantwana banokuchitha amandla kwi-1500m2 yengca ngaphandle kokubala elo dama lihlaziyayo?
Ungayifumana apha eGuararema! Ifakwe embindini wendalo enendawo yabucala kunye neflethi kufutshane neziko kunye nalo lonke ukhathalelo lwethu lokucoca ukukwamkela ngalo mzuzu ubuthathaka kakhulu. Sinesakhiwo esipheleleyo esine-intanethi esemgangathweni ukuze uzive ukwilizwe lakho. Yiza wabelane ngamava amatsha!
Indlu enomgangatho omnye kumbindi wendalo, zonke zibiyelwe ngesango lombane ukuze kungeneke ngokulula ngeendlela ezigangathiweyo nezikhanyisiweyo. Idama lokuqubha elinolwandle oluncinci, i-whirlpool kunye neengxangxasi. Ingca kunye nendawo yabucala. Indawo yokudlala eneqonga, isilayidi kunye nojingi.
Sineofisi enebhentshi kunye nesitulo, i-wifi esemgangathweni yeofisi yakho yasekhaya.
izinto ezintsha zasekhitshini, oomatrasi abakwizinga eliphezulu, ikhiosk enefriji, isitovu samaplanga kunye nebarbecue.
Ukucoca kwethu kwenziwa ngononophelo, ukuze wena kunye nosapho lwakho niphefumle umoya wenkululeko kunye nentuthuzelo.
Ummandla waseItaóca wawuyifama enkulu. Namhlanje yindawo ekumgangatho ophezulu enefama ezininzi kunye neekhondom, indawo ezolileyo enokufikelela ngokulula kwiziko ngokusebenzisa izitrato ezigangathiweyo nezikhanyisiweyo kunye nokuqokelelwa kwenkunkuma yemihla ngemihla. Ukufikelela kwindawo esihlala kuyo kungomnyango ophambili weGuararema kunye neParish yase-Escada, ilali enembali eninzi. Kufanelekile ukukhumbula ukuba isixeko siphela sibekwe esweni ziikhamera zokhuseleko zokhuseleko olukhulu kubo bonke abahlali kunye nabakhenkethi.
Umbuki zindwendwe ngu- Rosane
Nakuphi na ukuthandabuza ndiyafumaneka
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Guararema